होटल Alva डोना अनन्य होटल स्पा5* (BELEK, टर्की) फोटो र समीक्षा
हामी टर्की मा एक पाँच तारे छुट्टी मा पैसा खर्च भने त एक रिसोर्टमा होटल मा सबै कल्पना सुविधाहरु र सेवाहरु थिए। को शानदार कोठा नै शक्ति सँगसँगै गर्नुपर्छ र सधैं सिस्टम "अति सबै समावेशी" अनुसार। हामी टर्की को भू-मध्य तट मा छुट्टी मा जाने भने, यो छोराछोरीको आवश्यकता सोच्न आवश्यक छ। तिनीहरूले के खाने हुनेछ, कसरी आफ्नो फुर्सदको समय मिलाउन? होटल, एक परिवार छुट्टी को स्थान, विशेष गरी लक्जरी होटल रूपमा नै स्थिति मनोरञ्जन को एक विस्तृत विकल्प संग अतिथि प्रदान गर्दछ। कुनै न्यानो पानी मा सबै वर्ष दौर आराम गर्न स्पा अँगालेको, को जाडो सेन्ट निकोलस एक पानी पार्क एक यात्रा प्रतिज्ञा मा अरू कसैले, राम्रो, कसैले बस आंसू छैन पट्टी देखि टाढा चाहन्थे। र मनोरञ्जन यी सबै किसिम Alva डोना अनन्य होटल स्पा5* नाम अन्तर्गत होटल पाउन सकिन्छ। उसलाई के यात्री भन्न? यस लेखमा हामी होटल "Alva डोना अनन्य" यो handouts चित्रित मन वर्णन। हामी त्यहाँ विगतमा तिनीहरूलाई व्यवस्थित, (दुई हजार सोह्रौं) वर्ष भ्रमण गर्ने यात्री को समीक्षा विश्लेषण छ र अब तपाईं एउटा साधारण पर्यटक आँखा मार्फत होटल विवरण प्रस्ताव।
जहाँ होटल स्थित छ र Bogazkent को गाउँमा प्राप्त गर्न कसरी
टर्की, ANATOLIAN रिवेरा Serik क्षेत्र, BELEK शहर - को होटल Alva डोना अनन्य होटल स्पा5* आधिकारिक ठेगाना। तर, हामी सबै एक ठूलो क्षेत्र संग एक लक्जरी होटल हलचल चौथाई बीचमा निर्माण छैन भनेर थाह छ। BELEK देखि सात किलोमिटर Bogazkent एउटा सानो गाउँ हो। यसको सरहद मा, शहर को केन्द्र मा, र हाम्रो होटल द्वारा वर्णन गरिएको छ। निस्सन्देह, befits रूपमा यसको स्थिति को एक होटल, "Alva डोना अनन्य र स्पा" समुद्र द्वारा, लम्बाइ तीन सय मीटर यसको आफ्नै समुद्र तट छ। छुट्टी सिजन मा "सबै समावेशी अति" प्रणाली मा होटल संचालित र तथाकथित पर्यटक "प्याकेज" लाग्छ। त्यसैले चिन्ता छैन, ठाउँमा प्राप्त गर्न कसरी। साँच्चै, यात्रा एजेन्सीको एक टिकट मा आवश्यक बाट र विमानस्थल गर्न स्थानान्तरण समावेश छ। तर तपाईं बाँकी एक ठाउँमा हावा एण्टाल्या बन्दरगाह बाट प्राप्त कति छिटो थाहा गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि यस्तो जानकारी दिनुहोस्। होटल Alva डोना अनन्य होटल कि छ, यो एक घण्टा बारेमा जान हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चालीस किलोमिटर स्थित छ। त्यो अत्यन्त लामो ANATOLIAN रिसोर्ट्स मा औसत स्थानान्तरण समय तुलना छैन।
भूमि र आवास
वर्ग होटल "लक्जरी", को देहाती स्थान प्रयोग, भूमि को एक गम्भीर टुक्रा भयो। यसको क्षेत्र को क्षेत्र साठी-चार हजार वर्ग मीटर छ - सम्पूर्ण शहर! होटल पहिलो दुई हजार पाँचौं वर्षमा पाहुनाहरूलाई आफ्नो ढोका खुलेको छ। त्यसपछि उहाँले "Riva डोना।" भनिन्छ दुई हजार र यसको होटल चेन को नौ "Alva Hotelz" प्राप्त र होटल यसको वर्तमान नाम प्राप्त गरेको छ। नयाँ hotelier उच्च कोठा दुई हजार आवास को तेह्रौँ वर्षमा निर्माण गरे। एक सानो थप टाढा - "मुख्य भवन" समुद्र नजिक छ, र "डिलक्स"। दुवै आवास bridged। तर सामान्य मा होटल Alva डोना अनन्य होटल सात चार मंजिल्ला भवन। पर्यटक फोटो एक धेरै साइट समर्पित। त्यो धेरै राम्रो तरिकाले बाहिर सोचा छ। जहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईंले "Detached" छन् वा उच्च jinks बीचमा एक अर्थमा छ। सबै सेवा र नजिक सेवाहरू। स्विमिंग पूल, एक पानी पार्क मा, समुद्र तट मा, रेस्टुरेन्ट restrooms छ। यो, को पाठ्यक्रम, तर कारण यो सामान अन्य होटल मा एक trifle आफ्नो कोठा जाने छ। परिदृश्य डिजाइनर अद्भुत पार्क मा समुद्र तटीय बनाउन यथासक्दो प्रयास। जताततै त्यहाँ सुन्दर मूर्तिहरु छन्, फूल र shrubs बढ्न। छोटो मा, म यी सबै alleys र lawns हिंड्न चाहन्छु। होटल अन्तिम ठूलो मात्रा नवीकरण दुई हजार तेह्रौँ वर्षमा भयो, र जटिल परिवर्तन देखिन्थ्यो।
के अर्को छ
निस्सन्देह, Alva डोना अनन्य होटल थप एक होटल भन्दा सानो शहर मोजमस्ती जस्तै छ, तर अझै पनि यसको भित्ताहरू परे छ के थाहा चाहन्छ। Bogazkent - नयाँ टर्की समुद्र तटीय रिसोर्ट्स। फेला पार्न गाउँमा नाइटलाइफ - उनको BELEK जान आवश्यक छ। सजिलो बनाउन। सबै पछि, गाउँमा र शहर शटल marshutki-dolmushi बीच। तर Bogazkent जस्तै कसैले, त्यसैले यसलाई प्रकृति प्रेमीहरूको लागि हो। सम्पूर्ण वरपरको क्षेत्र, गाउँ नै साथ राष्ट्रिय निकुञ्ज को भाग हो "बर्ड प्रमोदवनमा।" चरा त्यहाँ बारेमा चालीस प्रजाति छन्। र केवल चरा यो प्रमोदवनमा बाँच्ने छैन। समुद्र तट Bogazkent को बलौटे फैलिएको मा धेरै अक्सर लेखिएको "सावधानी, कछुवा!" देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रतिनिधि प्रजाति Caretta caretta रोजेका ठाउँ आफ्नो अन्डा भन्ने हो। आफ्नो बच्चा आरक्षित स्थानीय बासिन्दाहरू हेर्न खुजली छ भने, नजिकैको होटल "Bellis डिलक्स" उसलाई लिन। यो एक चिडियाघर छ। सामान्य मा, समीक्षा Bogazkent गाउँमा धेरै सुरक्षित रिसोर्टमा उल्लेख। यो सबै माथि विशेष शानदार होटल निर्माण गर्नुपर्छ। तर रिसोर्ट सबै मनोरञ्जन साइट मा सामान्यतया छन्।
जहाँ पर्यटकहरु आराम कोठा
एक पर्यटकहरुका लागि मात्र budgetary कोठा पुरानो भवन छन् भनेर सोच्न हुँदैन। निस्सन्देह, सबै कोठा श्रेणी "मानक" को "मुख्य भवन" मा स्थित हो (र त्यहाँ दुई सय पचास चार छन्)। तर यो भवन र राम्रो कुरा छ। "मानक" इरादा दुई अतिथि लागि हो। परिवारको लागि, साधारण परिवार कक्ष, «kvadripl" (बच्चाहरु को लागि एक बंक बेड) श्रेणी "परिवार Bankbed" प्रदान। यस मामला र मुद्दा मा छ "उच्च।" तीन वा चार मान्छे को दुई अतिथि र परिवार रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। "मुख्य भवन" को एउटा वास्तविक मणि "सुइट्स" छन्। आफ्नो नाम उपयुक्त छन् त्यसैले तिनीहरू, तुर्क शैली सजाया छन्: "Pasha", "सुल्तान", "Madonna", "राष्ट्रपति"। र मुख्य भवन मा विशेष आवश्यकता अतिथि लागि तीन कोठा छन्। नयाँ भवन मा श्रेणी संख्या "डिलक्स" सुरु। ती सिंहको शेयर दुई अतिथि समायोजित डिजाइन गरिएको छ। तर त्यहाँ एउटा "जुनियर सुइट" र तीन पुरुष र चार छ। त्यहाँ एक जडान ढोका संग कोठा छन्। मामला मा कोठा श्रेणी "डिलक्स" र छन् "सुइट्स"। यो एक "जुनियर", "कार्यकारी" र "शाही" (शाही) छ।
कमरहरुमा। अतिथि कोठा के यात्री भन्न
टिप्पणी को सबैभन्दा "स्तर" फिक्री। यो एक एकदम ठूलो बेडरूम र adjoining बाथरूम छ। तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्न भने, विन्डो पार्किङ धेरै जानेछन्। फेरि, पूर्ण नम्बर परिवर्तन गर्न तपाईंको अनुरोध को स्वागत मा लोड Alva डोना अनन्य होटल मा भने छैन, केटी लज्जित गर्न केही छैन। सबैभन्दा पर्यटकहरु "मानक" कोठा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ थिए। befits रूपमा पाँच तारे होटल, अतिथि स्नान र चप्पल र विभिन्न सुखद trifles (टिप्पणीहरू कलम, एक सिलाई किरा, जुत्ता स्पन्जले संग, र यति मा। डी) प्रस्ताव छन्। "परिवार कोठा" एक जडान ढोका दुई बेडरूम हुन्छन्। यी कोठा मा एक बालकनी छ। त्यहाँ परिवारमा दुई बाथरूम सट्टा "उच्च" छन्। को "डिलक्स" प्याकेज सबै कोठा balconies छ। यो "सुइट्स" बारे भन्न लायक छ। तिनीहरूले जीवित कोठा, धेरै बाथरूम, एक स्थापित एक जक्यूजी संग, एक बेडरूम समावेश। होटल Alva डोना अनन्य होटल को गर्व गर्ने "Madonna" र "राष्ट्रपति सुइट" छन्। यी कोठा अलग फर्श मा अवस्थित छ। तिनीहरूले पनि सना र जक्यूजी संग समर्पित स्पा क्षेत्र छ। र, को पाठ्यक्रम, कोठा जो सेवाको वीआईपी कार्यक्रम मा लगे छ।
जहाँ होटल Alva डोना अनन्य होटल स्पा मा खान
सामान्यतया पाँच-तारे होटल एक मुख्य रेस्टुरेन्ट र धेरै 'ला' कार्टे छ। तर "Alva डोना अनन्य" कुनै अपवाद, पनि एक स्वागत टर्की लागि हो। मुख्य भवन ( "परिदृश्य") र नयाँ "डिलक्स" भवन - यो होटल दुई मुख्य रेस्टुरेन्ट छन्। यी सेवाहरू मा "बुफे" अन्तर्गत प्रदान गरिन्छ। तपाईं बिना मामला मा "दर्ता" को दुई भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। मौसम परमिट भने, तपाईं आउटडोर veranda मा potrapezovat गर्न सक्नुहुन्छ। रेस्टुरेन्ट भवन "डिलक्स" एक बच्चाको कोठा छ। अवधारणा प्रत्येक अन्य गरेको कम्पनी रोचक trapezovat सानो अतिथि छ। तिनीहरू खाना चयन र पूर्ण वयस्क महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, हल त्यहाँ सानो टेबल र कुर्सियों छन्। र ट्रे मा - बच्चा खाना व्यञ्जन। फ्रिज तपाईं रस बैग, दही, curds लाग्न सक्छ। वयस्क लागि खाना को लागि, यहाँ पर्यटकहरु व्यञ्जन को एक किसिम, उत्पादन र खाना पकाउने कौशल गुणस्तर भन्छन्। होटल Alva डोना अनन्य होटल5* (BELEK), मुख्य रेस्टुरेन्ट बाहेक, त्यहाँ छन् सात एक ला कार्टे। पर्यटक तिनीहरूले यात्रा तिर्न भनेर भन्छन्, तर छूट प्रारम्भिक बुकिंग लागि उपलब्ध छन्। र, पर्यटक नौ बारहरू मा पर्खिरहेका छन्, यो सबै माथि। तिनीहरूले समुद्र तट र पूल मा र लबी मा उपलब्ध पनि छन्। एक हुक्का पनि छ, तर यो सेवा थियो - भुक्तानी।
के मान्छे खाना समीक्षा भनिरहेका छन्,
प्रत्येक कोठा Alva डोना अनन्य होटल स्पा (टर्की) एक विद्युत केतली र कफी र चाय को एक सेट, साथै मिनी-बार छ, प्रयोग जो मुक्त छ। यो हरेक दिन replenished छ। "अल्ट्रा सबै Inclusive" खुशी महंगा आयात रक्सी र अनन्त नाश्ता समावेश, तपाईं त इच्छा मेरो टाउको मा आउँछ Bude। उबला मकै बिना समुद्र तट के छुट्टीको? हामी जब बर्डियांस्क वा Vityazevo गए, एक बच्चा रूपमा प्रयोग गरिन्छ। र पर्यटकहरु परम्परा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर होइन, उसिनेर मकै यहाँ प्रस्ताव, नि: शुल्क। र, तपाईं अतुलनीय टर्की gozleme केक वा आइसक्रिम स्वाद गर्न सक्छन्। नास्ता लागि ताजा सुन्तला रस र कफी, र एक मेशिन गन, स्वादिष्ट, प्राकृतिक प्रस्ताव। तपाईंको आगमन गर्न तपाईं कोठा मा रक्सी र फल टोकरी को एक बोतल प्रतीक्षा गरिनेछ। र तपाईं छुट्टी अवधि जन्मदिन पतन छ भने, त्यसपछि तपाईं एक जन्मदिन केक रूपमा होटल देखि एक प्रशंसा हुनेछ। पट्टी एक तनावमुक्त वातावरण, कुनै लाइनहरू, र यो होटल रूसी पर्यटक रोजेका भन्ने तथ्यलाई बावजुद छ। एक ला कार्टे खाने एक शुल्क र पूर्व आरक्षण उपलब्ध छ। तर आफ्नो छुट्टी विविधता चाहनुहुन्छ गर्ने पर्यटकहरु रोकियो गरेको छैन। तिनीहरूले विशेष गरी "स्टेक हाउस" बारे अनुकूल समीक्षा छोड्नुहोस्। ग्रील्ड मासु प्रेम यसलाई त्यहाँ प्रेम हुनेछ। पनि प्रशंसा जापानी रेस्टुरेन्ट ( "Teppenyaki"), फ्रान्सेली, इटालियन ( "नीलम"), चिनियाँ र माछा ( "रोम माछा") भोजन को योग्य।
समुद्र तट को रिसोर्ट जटिल स्वामित्वको
के को लागि टर्की जाने, तर सूर्य र समुद्र? होटल Alva डोना अनन्य होटल स्पा एक निजी समुद्र तट trehsotmetrovoy छ। उहाँले बालुवा र रोडा। समीक्षा गर्दा समुद्र प्रवेश पत्थर सानो र चिल्लो छन् भन्छन्। ताकि समुद्र तट मा पेबल्स को कुनै असुविधा उपस्थिति कारण छैन। कोस्ट पूर्ण सुसज्जित। एक शौचालय, शवर र ताजा र cabanas पनि छ। Lifeguard, बार। समुद्र तट प्रस्ट क्षेत्र छ "सोह्र प्लस।" यो - मतदान उमेर जो तल बच्चाहरु यस साइटमा pobrezhya अनुमति छैन। पनि समुद्र तट मा त्यहाँ एक चदंवा अन्तर्गत नरम सोफे संग पाल छन्। यी "बाली-घर" को प्रयोग भुक्तानी भएको छ। को जाडो 2016-2017 वर्ष मा होटल भ्रमण गर्ने पर्यटक, तपाईं पनि समुद्र बन्द-सिजन मा डुबुल्की मार्न सक्छन् भनेर याद गर्नुहोस्। तट बतास र आँधीबेहरी देखि सुरक्षित छ, र दिउँसो मा खोक्रो पानी पहिले नै न्यानो हुन्छ। र ANATOLIAN रिवेरा मा आधिकारिक छुट्टी सिजन अप्रिल को बीसौँ खुल्छ।
पूल र पानी पार्क
यस शान्त र ताजा पानी मा पौडी खेल्न, र रुचि जो एक आफ्नो शरीर को समुद्री तत्व होटल Alva डोना अनन्य होटल5* पूर्ण expanse हुनेछ भरोसा गर्न। का गणना गरौं। दुई सुतिरहेको अवस्थामा एक आउटडोर पूल छ। तपाईं जाडो पर्यटक समीक्षा विश्वास भने, यी ट्यांक को एक तापमान प्लस बीस-नौ डिग्री गर्न गरम छन्। यो भवन आफूलाई इन्डोर पूल हो। तिनीहरूले पनि गर्मी मा, गरम छन्। खनिज पानी भरिएको स्विमिंग पूल पनि छ। पानी पार्क छैटौं ट्यांक तल हाल्छ। वयस्क पूल मा होटल मा उछिट्टिएको Alva डोना अनन्य होटल5* बच्चाहरु को लागि एक खोक्रो पानी छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद स्नान बच्चाहरुका लागि तीन ट्यांक छन्। पहिले, यो एक मिनी-क्लब स्विमिंग पूल छ। दोश्रो, ट्यांक, जहाँ चार छोराछोरीको पानी पार्क तल हाल्छ। र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, त्यहाँ समुद्र तट मा एक स्विमिंग पूल छ। उहाँले पानी समुद्र भरिएको छ। यो आँधी मा खतरनाक तत्व गर्न धेरै उपयोगी वैकल्पिक बन्नेछ। कि वयस्क आउटडोर पूल दाबी, जाडो मा होटल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको हावा साइटबाट sheltered छ, त्यसैले तपाईं बस न्यानो पानी मा मजा लागि पौडी खेल्न सक्छ, तर पनि कुर्सियों मा सूर्य एक तन प्राप्त। मात्र नकारात्मक - पानी पार्क उज्यालो दिन छैन चलिरहेको छ, र मात्र दिउँसो तीन बजे सम्म छ। नौ स्लाइडहरू पाँच वयस्क लागि मात्र डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। छोराछोरी पानी पार्क मा एक आकर्षण छोराछोरीलाई सम्पूर्ण डिजाइन गरिएको छ। जाडो पर्यटकहरु पानी पार्क सिजन काम र छैन भनेर दाबी गर्छन्। पूल तल जहाँ स्लाइडहरू, गरम।
स्पा र खेल मनोरञ्जन
यो विश्राम यस प्रकारको, होटल Alva डोना अनन्य होटल स्पा (BELEK) कुरा गर्न समय। त्यहाँ स्पा मा सशुल्क र 'अनावश्यक' सेवाहरूको स्पष्ट विभाजन छ। उत्तरार्द्ध एक फिनिस सना को प्रयोग, टर्की बाफ स्नान (Hamam) समावेश गर्नुहोस्। र तपाईं आफ्नो गैर-सीमित भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा यो छ कि आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्न छैन छ। साथै, कसरी बिल्कुल मुक्त तपाईं हट टब, दुई आवासगृह को basins समेटिएका छन् जो आराम गर्न चाहनुहुन्छ रूपमा। शुल्क-तिर्ने प्रक्रिया को लागि मसाज को विभिन्न प्रकार समावेश गर्नुहोस्। यी विशेषज्ञहरु होटल मा काम। तपाईं Alva डोना अनन्य होटल स्पा5मा रहन भने * समीक्षा तपाईं टर्की (फोम) मालिश कम्तिमा एक सत्र प्रयास गर्न सल्लाह। होटल मा त्यहाँ पनि सशुल्क सेवा हो जो एक सना, छ। तर तपाईं फिटनेस कोठा मा आधुनिक फिटनेस उपकरण बाहिर काम गर्न बिल्कुल मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। खेल खेल्दै बिना एक दिन बाँच्न सक्छ नगर्ने ती लागि, त्यहाँ भलिबल र बास्केटबल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, एक मिनी फुटबल हो। डार्ट्स, चेस, टेबल टेनिस सहित आवश्यक उपकरण, तपाईं नि: शुल्क लिन सक्छ। पैसा बिलियर्ड्स र बलिङ को खेल को लागि मात्र भुक्तानी गर्न छ।
बच्चाहरु को लागि सेवा
साना अतिथि - होटल Alva डोना अनन्य होटल स्पा मा पर्यटकहरु सबैभन्दा सुअवसर श्रेणी। समीक्षा जब तपाईं आउन, सधैं त्यहाँ बच्चाहरु धेरै छन् भन्छन्। कान्छो अतिथि लागि होटल cribs, playpens, बर्तन, उच्च कुर्सियों प्रदान गर्दछ। एक सानो पुरानो टुकडा भने, प्रशासन शौचालय मा बाथरूम मा चुच्चो सेट र बच्चा डुब्नु पुग्न सक्छ त्यसैले कि, डुब्नु अन्तर्गत खडा हुनेछ। हामी पहिले देखि नै एक उपयुक्त आहार मेनु संग छोराछोरीको भोजन कक्ष बारेमा उल्लेख गरेका छन्। र शिशुहरू को आमाहरु लागि बच्चाहरु को लागि एक माइक्रोवेव ओवन, ताप बोतल लागि उपकरण र डिब्बाबंद खाना छ। एक बच्चा चार वर्षको गरिएका छ भने, यो एक मिनी-क्लब दिइएको गर्न सकिन्छ। यो केटी एनिमेटरहरु त्यहाँ सामना गर्नेछ। मोडलिङ, प्रतियोगिताहरु, बाहिरी खेल र कार्टून पूर्वावलोकन - बच्चाहरु मात्र चमकिलो मामलामा मिनी क्लब को कुरा। खेल मैदान एक Trampoline छ। र अतिथि को सुअवसर विभाग, एक डिस्को लागि साँझमा।
के प्रतिक्रिया होटल Alva डोना अनन्य होटल स्पा कमाएको छ
हिउँदमा होटल भ्रमण गर्ने पर्यटक, तिनीहरूले "बन्द-सिजन" कुनै पनि असुविधा महसुस छैन भन्छन्। सबै सेवा र सेवाहरू गर्मी मा काम। समीक्षा पनि यस होटल मा तपाईं रूस देखि ज्यादातर समूह गरेको याद गर्नुहोस्। तपाईं निर्णय गर्न प्राप्त, प्लस वा माइनस। तर सबै कर्मचारीहरु, को स्वागत मा र रेस्टुरेन्ट र बारहरू दुवै, रूसी भाषा थाहा छ। गर्मी मा, वयस्क एनिमेशन पनि पप स्टार आमन्त्रण। पर्यटकहरूले कर्मचारी को आतिथ्य र मित्रता भन्छन्। यो जटिल थुप्रै रहन एक शानदार महल, जहाँ आफ्नो इच्छा को कुनै पनि प्रदर्शन मा रहन देखिन्थ्यो। तर, कहिलेकाहीं एक शुल्क लागि।
Savoy बीच क्लब3*। कोस्टा ब्रावा रिसोर्ट्स, होटल, यात्री समीक्षा
होटल बेला एक्सप्रेस होटल, पटाया: समीक्षा, वर्णन र समीक्षा
महान् होटल Krasnaya Polyana - रूसी प्रतिक्रिया Courchevel
होटल Sonesta फिरऊनले5(पूर्व Melia फिरऊनले)
ए Dementiev - सोभियत लेखक। "आमा को बलाड" - युद्ध बारे एउटा कविता
ट्रन्डमममा निडारस कैथेड्रल: विवरण, इतिहास र रोचक तथ्यहरू
युमेन क्षेत्रमा कानूनी सेवा
मेट्रो नक्शा पत्रुस र यसको विकास संभावनाहरु
थिएटर "व्हील": इतिहास, मुग्ध पार्ने संगीतको, troupe। Drozdova नतालिया - को थिएटर को पूर्व निर्देशक
अनुक्रमणिका अभिभावक राजधानी: कसरी 2016 मा योगफल को आकार असर?
वोदका "Barshchouka": वर्गीकरण, संरचना, समीक्षा
फेब्रुअरी, रूस केही बिदा?
कागजात के हो? कागजात को प्रकार संगठन। मानवअधिकार आउटसोर्सिंग
संसारको असामान्य जनावर - यो संसारमा तिनीहरूलाई को कति?
टेस्टोस्टेरोन के हो र यो किन शरीर लागि महत्त्वपूर्ण छ